Masaf The Hacks lagacna - Masaf Of The Day
Masaf The Hacks lagacna
Abuuritaanka content for lagacna a waxa uu had iyo jeer adag.
Haddii aad la tacaalayso xaqiiqada ah in aad doonaa laga yaabaa in la dhagaystayaasha ah wax looga qabto oo laga yaabo in koox ka mid ah tartamayaasha ku murmeen dhexdooda waxa uu noqonayaa hawl aan macquul aheyn.
Gaar ahaan, sababtoo ah aad rabto in aad qof walba u noqon sidaan u guuleysata aad tahay.
A hacks masaf lagacna waxaa u malaynayeen in ay ku siin farsamooyinka in ay gacanta sarre u taliya dadka bixinaya nooca la mid ah adeegyada in aad la halgamaya inay iska iibiso on adiga kuu gaar ah.
Maskaxda ku hay in isticmaalka hab xirfadeed uusan waxba ka dhimin xaqiiqda ah in aad la xiriirayso dadka in ay leeyihiin doonaa ma contemplations ku saabsan gudbaan tartan si ay u guulaystaan ​​on iyaga u gaar ah.